Liyoung စိုက်ပျိုးရေးအဆင့် polyglutamic အက်ဆစ်
polyglutamic acid (γ-PGA) သည် natto bacteria gum ဟုလည်းလူသိများသော polyglutamic acid သည် microbial fermentation မှရရှိသော ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော၊ ဇီဝရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နိုင်သော၊ အဆိပ်မရှိသော၊ biopolymer တစ်ခုဖြစ်သည်။γ-PGA polyglutamic acid သည် "natto" - စိမ်ထားသောပဲများတွင် ပထမဆုံးတွေ့ရှိသော စေးကပ်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။γ-PG...
Shandong Liyoung Bio-polyglutamic အက်ဆစ်အစားအစာလျှောက်လွှာ
http://www.cnhyaluronicacid.com ကောက်နှံများ၊ မုန့်ဖုတ်ခြင်း 1. ကယ်လ်စီယမ်နှင့် သတ္တုဓာတ်စုပ်ယူမှုကို တိုးမြင့်စေခြင်း 2. အသီးအနှံများ နည်းပါးလာခြင်း 3. ပျော့ပြောင်းလွယ်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း၊ အနံ့အရသာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း 4. အရသာကောင်းမွန်ပြီး သက်တမ်းရှည်ကြာ သိုလှောင်ခြင်း 5. ၎င်းသည် ထုထည်ပမာဏကို တိုးမြင့်စေပါသည်။ မုန့်ဖုတ်ပြီးရင် ရေဓာတ်ကြွယ်ဝတယ်...
Shandong Liyoung ဇီဝစိုက်ပျိုးရေးလျှောက်လွှာ polyglutamic အက်ဆစ်
γ-Polyglutamic acid γ-PGA ကို အပင်အထွက်နှုန်းတိုးစေရန်အတွက် အာဟာရအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် 1. γ-Polyglutamic acid γ-PGA Hydrogel နှင့် γ-PGA စူပါဟိုက်ဒရိုဖီလစ်နှင့် ရေကို ထိန်းထားနိုင်သော စွမ်းရည် မြေကြီးထဲတွင် နစ်မြုပ်သွားသောအခါတွင် ဖလင်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ အပင်၏ အမြစ်ဆံပင်မျက်နှာပြင်၊...
Shandong Liyoung Bio-polyglutamic အက်ဆစ်အလှကုန်လျှောက်လွှာ
Liyoung အလှကုန်အဆင့် Polyglutamic အက်ဆစ်
γ-Polyglutamic acid (γ-PGA, γ-polyglutamic acid), CAS NO: [ 25513-46-6 ] ၎င်းသည် ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော၊ ဇီဝပိုးမွှားချေမှုန်းနိုင်သော၊ အဆိပ်အတောက်မရှိသော၊ အဏုဇီဝပိုလီမာများ၏ အချဉ်ဖောက်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။Gamma-PGA polyglutamic acid (gamma-polyglutamic acid) သည် စေးကပ်စေသော ပထမ...
Cross Linked Hyaluronic Acid Pdo Cog Threads Hyaluronic Acid ထိုးဆေး ထိုးဆေး Dermal Filler Hyaluronic Acid ၊ Dermal Filler ၊